Ophumelele ngu …. | Scrolla Izindaba
Ophumelele ngu ….
Ekuqaleni kwalenyanga, sibuze abafundi bezindaba zethu ukuthi bakwazi ukukhuluma izilimi ezingaki, nendaba yokuthi bakwaze kanjani ukuzikhuluma.
Kubo bonke abantu abangenele imincintiswano, kube nendaba eyodwa esihlabe umxhwele kunazo zonke …
U-Ingrate Lamola wase-Alexandra wasihlaba umxhwele, hhayi ngekhono lakhe elihlaba umxhwele lokukhuluma izilimi eziningi kangaka, kodwa nangokufuna kwakhe ukwazi, kanye nomusa lapho esebenzisana namanye amasiko.
U-Ingrate, oneminyaka engama-36, ukhuluma izilimi eziyi-11 sezizonke.
Ngesikhathi eqala ukusibhalela, wasitshela ukuthi wazalelwa e-Mokopanin, e-Limpopo, kodwa wachitha isikhathi sonke sobuntwana bakhe e-Alex, nokuyilapho afunda khona iningi lalezi zilimi.
Ukhuluma isiPedi, iSeSotho, isiNgisi, isiBhunu, isiNdebele, isiZulu, isiXhosa, isiTswana, isiTsonga, isiVenda nesiPutukezi, asifunda ngenkathi evakashele e-Mozambique.
Uthe wabona ukuthi wayenenhliziyo ethanda izilimi ngenkathi kufika kuye ukuthi uyakwazi ukufunda nokubhala ngazo zonke!
Sihlangane no-Ingrate ngesonto eledlule ukuze sifunde kabanzi ngendaba yakhe.
Ocingweni lwevidiyo, usitshele ngempilo yakhe esemncane nokuthi yamazisa kanjani ngesipho sakhe sokufunda izilimi.
“Ngihlale e-Alex isikhathi eside! Ngakho ngakhulela e-Alex lapho esihlangana khona nabantu abaningi futhi sithola amathuba amaningi,” esho.
Uqhube wathi, “Izilimi engazifunda kuphela esikoleni isiBhunu, isiNgisi neSiPedi. Izilimi eziningi ngazifunda ezitaladini e-Alex.”
Yize u-Ingrate eseyisazi sezilimi ngokugcwele manje, wenza ihlaya ngokuthi wayecishe aphambanise izilimi esikoleni!
Wahleka, “IsiBhunu ngasithola ngo-D kumatikuletsheni wami kanye no-E esiNgisini sami… Bekungilungele kodwa hhayi kuthisha wami wesiNgisi!”
Kuleli sonto, ithimba lethu lamajaji livakashele uLamola e-Alex, lapho afike wababingelela ngezindlela eziyi-11 ezahlukene.
Ngemuva kokumnika umklomelo kamakhalekhukhwini wakwanokusho omusha sha we-Nokia 2.2., Uthe: “Ngijabule kakhulu ukuthi ngiwine umakhalekhukhwini (ngicabanga ukuthi ngiwudinga kakhulu! Ucingo oluhle kakhulu, sibonga abakwa-Scrolla.Africa!”